Year End Sale Promotion - Mr. Discount (Myanmar)
Home / Offers / Year End Sale Promotion
Buy5times - Get 1 time free Buy 10 times- Get3times free
🎄🎄တစ်ခါမှမပေးဖူးတဲ့ အရမ်းတန်တဲ့ Year End Sale Promotion ကြီး လာပါပြီနော်🎄🎄
ဈေးအများကြီး လျှော့ထားတာမို့ များများဝယ်ထားလေ ပိုတန်လေပါနော် 🙀🙀🙀
💥Advanced white and red PRP
3 times – 30% off
5 times – 40% off
💥 အဆီကျထိုးဆေး နှင့် အဆီချ လေဆာ
Buy 10 times – Get 3times Free
💥 တင်းတိတ် ၊ ဝက်ခြံ ကုသမှု
5 times – 10 % off
10 times – 20% off
💥 အမွှေးအမျှင် ဖယ်လေဆာ
10 times – 20 % off
💥 အသားကြည်နုပျိူဆေး ထိုးခြင်း
10 times – Get5times Free
💥 မျက်နှာ အစိတ်အပိုင်းဆေးထိုးပြုပြင်ခြင်း
Botox , Filler , Thread – upto 30% off
💥 Beauty Facial Treatments
💥 Timeless collagen injection
Buy5times – Get 1 time free
Buy 10 times – Get3times free
💥 Miracle Body Spa
Buy one time – 10% off
Buy3times – 20% off
💥 IPL and Laser Rejuvenation
Buy 10 times- Get3times free
🎄ဒီတစ်လထဲ ဈေးအရမ်းလျှော့ထားတာမို့ အမြန်ဆုံး လာဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်နော် ( တစ်လမှာ တစ်မျိူး ပဲ Promotion ပေးတတ်ပါတယ် )
🎄ကုသပြီးသူတွေရဲ့ review တွေကိုလည်း Page review. ထဲဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင့်
🎄ကဲ……. နှစ်သစ်မှာ ကိုယ့်မျက်နှာလိုအပ်ချက်လေးတွေ ပြင်ဆင်ပြီး modify ချင်ရင်တော့ Smart Skin ကိုသာ သတိရလိုက်နော်
^^Be Smart with our Smart Skin ^^
🎄🎄Smart Skin Beauty Clinic🎄🎄
29, အဝေရာလမ်း , ရန်ကင်း ၁၅ ရပ်ကွက်
09 750 110 561, 09 750110562
Smart Skin မှ ဤ Promotion သည် December 31, 2019 အထိသာဖြစ်ပြီး Promotion တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Promotion အား ဤ website တွင် စတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသော နေ့မှာ December 17 2019 ဖြစ်ပြီး Smart Skin မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤ Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက Smart Skin ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။